ओलीले मलाई धन्यवाद दिनुपर्छः डा.भीम रावल (भिडियो अन्तर्वार्ता) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य डा.भीम रावलले पार्टी विवादमा सहमति नभए विधानअनुसार बहुमत र जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा निर्णय गरिने बताएका छन् ।
एभरेष्ट दैनिकसँग कुरा गर्दै रावलले सहमतिको विकल्प नरहेको र त्यो प्रयास सफल हुन नसके पार्टीको विधानअनुसार बहुमत र जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा निर्णय गरिने बताएका हुन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सहमतिको विकल्प छैन । अन्तिमसम्ममा पनि सहमति भएन भने पार्टी एकता गर्दा तयार गरिएको पार्टीको विधानअनुसार बहुमत र जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा निर्णय हुन्छ । त्यो सबैका लागि बाध्यकारी हुन जान्छ ।’
‘ओलीका कारण विवाद’
उनले पार्टी विवादको मुख्य कारण अध्यक्ष केपी ओली नै रहेको आरोप लगाए । ‘प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीज्यूले समयमै बैठक बोलाइदिएको भए, बैठकमा नियमित उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्ने र अरूको कुरा सुन्ने गरेको भए पार्टीमा अहिले समस्या आउने थिएन’, रावल थप्छन्, ‘बैठक छोडेर सार्वजनिक मञ्चमा भारत आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लाग्यो, त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू समेत लागे भनेपछि विवाद बढेको हो ।’
उनले स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डामा ओलीको राजीनामा नरहेको स्पष्ट पार्दै उनकै कारण उक्त विषयले स्थान पाएको दाबी गरे । उनले सबै समस्याको समाधान बैठक नै रहेको बताए ।
याे पनि पढ्नुस ओलीसँग फेरि कड्किए भीम रावल, भने– भागेर पार्टी चल्दैन
‘स्थायी कमिटी बैठक सुचारु गरेर समापन भएन भने पार्टी विसर्जनको बाटोमा जान्छ । दुबै अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले सहमति गरेर बैठक बोलाउनै पर्छ । निकास निकाल्नै पर्छ’, बैठक बोलाउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै रावलले भने ।
उनले दुई अध्यक्षबीच सहमति नभए अन्य विकल्प पनि रहेको बताए । उनले विकल्पबारे अगाडि थपे, ‘हाम्रो पार्टीमा सानो झ्याल मात्रै छैन, ठूलो ढोका पनि छ । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर पनि समाधान निकाल्नैपर्छ । ओलीले बैठकमा आउनैपर्छ । आफू मात्रै पार्टी हु र आफूमात्रै सबैथोक हु भन्ने भ्रम कसैले पाल्नुहुँदैन ।’
‘विवाद पदका लागि हैन’
उनले अहिलेको विवाद पदका लागि नभएको स्पष्ट पारे । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका नेता रहेका रावलले त्यसबारे थप प्रष्ट्याए, ‘अहिलेको विवाद पदका लागि हैन । पार्टी र सरकार नीति–नियम, विधान र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने हो । यदि पदका लागि हो भने बैठकको एजेण्डामा नै ओलीको राजीनामा भन्ने विषय आउथ्यो । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीलाई नै ५ वर्ष सरकार चलाउन दिने निर्णय गर्नुहुँदैनथ्यो होला ।’
याे पनि पढ्नुस मैले प्रचण्डको आलोचना गरेको छैनः डा.भीम रावल
रावलले पार्टी विघटनको संघारमा नपुगेको र र फुट्नुपर्ने कुनै कारण पनि नरहेको दाबी गरे ।
उनले पार्टी नीति र नियममा चल्नुपर्ने माग गर्दै आएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘पार्टी फुटाएर गर्न खोजेको के ? सरकार धेरै समय चलाइयो भनेर फुटाउन लागिएको हो कि ?’ उनले अहिले पार्टी फुट्नु देश र जनतालाई धोका हुने चेतावनी दिए ।
‘सरकार र पार्टीको समीक्षा हुनुपर्छ’
रावलले सरकार र पार्टीको समीक्षा हुनुपर्ने बेला आएको बताए । जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सरकार र पार्टीले काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै उनले कतिपय काम सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘ओलीले मलाई धन्यवाद दिनुपर्छ’
रावलले धेरैलाई सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीको कडा आलोचकका रुपमा चिन्छन् । तर, रावल भने त्यो कुरा स्वीकार्दैनन् ।
उनी भन्छन्, ‘मलाई प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष अ‍ोलीले धन्यवाद दिनुपर्छ ।’
सरकार र ओलीको आलोचकलाई उल्टै धन्यवाद किन दिने भन्ने प्रश्नको जवाफ रावलले सविस्तार सुनाए, ‘मैले व्यक्तिगत रुपमा ओलीको आलोचना गरेको छैन । सरकारका राम्रा काम नयाँ नक्सा जारी गर्र्दा, चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्दा वा राष्ट्रहितका विषयमा सबैभन्दा पहिला र मैलेजति सरकारको कसैले प्रंशसा गरेको छैन । तर, होली वाइन प्रकरण, संयुक्त सैन्य अभ्यासलगायत जे नेपालको परराष्ट्र नीति, संविधान विपरित, राष्ट्रहित विपरित छन्, तिनको पो मैले विरोध गरेको हुँ । यी विषयमा मैले विरोध गर्दा रोकिएका छन् । सरकारलाई फाइदा पुगेको छ । यस अर्थमा मलाई ओलीज्यूले धन्यवाद दिनुपर्ने होइन र ?’
उनले भने, ‘आलोचनालाई सकरात्मक तरिकाले लिनुपर्छ । हैन भने मैले उठाएका विषय गलत भनेर प्रमाणित गर्नुपर्यो । देश, जनता, सरकार र पार्टीको हित हुने कुरा बोल्दा भीम रावलले त सरकार र प्रधानमन्त्रीको आलोचना मात्रै गर्यो भनेर कुप्रचार किन गर्ने ?’
ट्याग्स: डा. भीम रावल